I-Condo kanokusho -Khona emanzini!!
Bridgetown, Christ Church, i-Barbados
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Philip & Tina
Umbhede owu-3 kanokusho, i-condo yokugezela engu-3 ene-patio evulekile ngendlela emangalisayo ebheke ngqo ulwandle kanye nedamu lokucwilisa eliseduze.
Amakamelo okulala anomoya opholile: osayizi abakhulu ababili abanama-en suite, indlovukazi eyodwa ekwazi ukufinyelela okugeza kwezivakashi. Indawo evulekile evulekile yokuhlala / indawo yokudlela ene-TV enesikrini esiyisicaba. Wonke ama-mod cons ekhishini inc umshini wokuwasha izitsha, umenzi wekhofi, iwasha nokomisa.
Ipaki yemoto evikelekile. Khuphukela esitezi sokuqala. Ukufinyelela kwesango olwandle ngesihlalo / ukuqasha isambulela. Hamba uye ezitolo, e-spa, ezindaweni zokudlela namahhala. Woza uhlanganyele nathi kuma-sundowners!
Le ndlu yokugezela ebekwe ngokunethezeka engu-3 imibhede engu-3 igcina ubumfihlo bayo obuthule ukusuka emgwaqeni obheke ngqo emanzini aluhlaza okwesibhakabhaka e-St Lawrence Bay, futhi nokho iyindawo nje yokuphonswa kwetshe ukusuka ekungeneni “esiGabeni” nezindawo zayo zokudlela ezidumile kanye nempilo yasebusuku ephithizelayo.
I-patio evulekile iyisici esiphawuleka kakhulu saleli khaya lamaholide futhi inikeza i-vista ekhangayo nganoma isiphi isikhathi sosuku - ikhofi lasekuseni ukuya ku-cocktails ekushoneni kwelanga - elinesethi yokuphumula ezihlalo eziyisishiyagalombili, imibhede yelanga emibili kanye nedamu lokucwila lamanzi ahlanzekile elixhumene. Ifulethi lonke lineziphephetha-moya kodwa liklanyelwe ngokukhethekile ukukhuthaza “umoya ohelezayo” uma ukhetha umoya ohlanzekile.
Igumbi lokulala elikhulu elinombhede olingana nenkosi libukeka ngendlela efanayo yolwandle ngefasitela lesicabha esishelelayo, futhi linendawo yokuhamba ngezinyawo, kanye nendlu yokugezela enkulukazi ene-en suite eneshawa nobhavu. Igumbi lokulala lesibili elinesici esifanayo, nalo lilingana nenkosi ene-en suite. Igumbi lesithathu lokulala linombhede wendlovukazi futhi elikwazi ukungena endlini yokugezela yezivakashi.
Ikhishi lifakwe wonke ama-mod cons nangaphezulu kwezinsiza zikagesi, okuhlanganisa i-microwave, umshini wokugeza izitsha kanye nomenzi wekhofi, kanye nezitsha nezinto zokusika ezifika kweziyisishiyagalombili. Ukuze kube lula kuwe, kukhona newasha nesomisi esifakwe ngobunono kwelinye lamakhabethe. Izitulo ezintathu zamabha endaweni ephakathi kwekhishi nendawo yokuhlala zinikeza ithuba lokuhlala futhi uxoxe nompheki oqokiwe wakusihlwa, noma ukumane uphuze itiye lakho.
Itafula lokudlela elinezihlalo eziyisishiyagalombili libekwe ngokunethezeka epulani yokuphumula evulekile eduze kukasofa omude ophansi onezihlalo ezijulile ngendlela ekhangayo ukuze ukwazi ukuphumula ubuyele eholidini lakho. Buka i-TV kusikrini esiyisicaba esingu-55”, uma ungafuni ukuphuthelwa yilowo mdlalo webhola lezinyawo obalulekile.
Kunendawo yokupaka eyabelwe imoto eyodwa kanye ne-fob efanayo esetshenziselwa ukungena endaweni yokupaka izimoto izophinde ivumele ukungena kwesango (ubumfihlo bakho nokuvikeleka endaweni) phansi ngezinyathelo eziqinile eziya eSandy Beach kwesokudla, lapho ulwandle lubhajwa khona i-Carib ( Ihora lenjabulo 5-6 nsuku zonke) kanye noMnu Tikkles batholakala. Ukufinyelela esitezi sokuqala kungazuzwa ngezitebhisi ezizimele noma nge-lift.
Njengoba kushiwo, kunezindawo zokudlela eziningi namabha ongakhetha kuzo ku-Gap futhi ngenkathi sithanda ukuncoma ama-Castaways ikakhulukazi - anhle kakhulu kuma-sundowners - njengoba abelana ngombono ofanayo nanjengokuvulandi wakho siqu, ungase ukhethe ukuhlala ekhaya. , phumula futhi ujabulele...
Ibungazwe ngu-Philip & Tina
UPhilip & Tina Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Bridgetown namaphethelo